Mashruucii Berbera corridor oo la dhagax dhigay, iyo waxyaabaha laga filayo markuu hirgalo. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Mashruucii Berbera corridor oo la dhagax dhigay, iyo waxyaabaha laga filayo markuu hirgalo.
Mashruucii Berbera corridor oo la dhagax dhigay, iyo waxyaabaha laga filayo markuu hirgalo.
Berbera( Somalilandmirror.com)- dawlada Somaliland ayaa xaflad wayn u qabatay mashruuca Berbera corridor, yadoo ay kasoo qayb galeen madax ka socota dawlada Imaaraatka iyo Ethiopia.
Mashruucan ayaa la filaya inuu ka qayb qaadan doono xasilinta, iyo kobaca dhaqaalaha mandaqada geeska Afrika. islamarkaana isku xidhaya Ethiopia iyo Somaliland ganacsi ahaan.
Mashruucan ayaa marka uu hirgalo ka dhigaya Berbera ama Somaliland xaruun ganacsi oo muhiim ah, islamarkaana la tartansiinaya dakadaha caalamka.
Waxa kale oo la rajaynaya inuu mashruucani kobciyo warshadaha Somaliland ee kala duwan, fursado shaqana abuuro, xoolihii noolana suuqyo cusub u furo.
Madaxwahnaha Somaliland Muuse Biixi ayaa ka qayb galay xaflada dhagax dhiga mashruuca Berbera corridor.
Madaxwaynaha ayaa ka hadlay xidhiidhka wanaagsan ee u dhaxeeya Somaliland iyo dawlada Imaaraatka, islamarkaana mahadnaq u jeediyay Madaxwaynaha Imaaraatka shiikh khaliifa bin Zaayid, iyo dhaxal sugaha Imaaraatka Shiikh Maxamed bin Zaayid.
Waxa isaguna dawlada Imaaraatka uga qayb galay, Mudane Khaliifa Al qubaisi ku xigeenka maamulaha Hay’ada Abu dhabi ee horumarinta , waxaana hadaladiisii ka mid ahaa , dhagax dhiga mashruuca Berbera corridor wuxuu qayb wayn ka qaadanaya kobcinta dhaqaalaha Somaliland.
Wuxuu kale uu yidhi in madaxda dawlada Imaaraatka carabtu ay Marwalba diyaar u yihiin inay wax la qabtaan dawlada Somaliland inta ay gaadhayso horumar buuxa.
Khaliifa Al qubaisi wuxuu kale uu sheegay in Hay’ada horumarinta Abu Dhabi ay kordhinayso la shaqaynta Somaliland, si xidhiidhka labada dal u sii waynaado, islamarkaana mashaariic horumarineed oo wax wayn u tara nolosha muwaadiniinta Somaliland la hirgaliyo.
mashruuca Berbera corridor ayaa waxa la filayaa inuu ka dhigo dekada Berbera mid aad u muhiima, waayo waxa ay noqonaysa marin ay suuqyada caalamka u maraan badeecadaha kala duwan. arintaas ayaa Somaliland usoo jiidaysa maalgashi iyo shaqo abuur, islamarkaana dakhliga Somaliland soo galaya sahlaysa inuu noqdo mid meela kala duwan kasoo gala.
Previous PostXukun Dil Ah Oo Lagu Riday Shan Nin Oo Lagu Helay In Ay Geysteen Kufsi Wadareed. Next PostMadaxwaynayaasha Somaliland Iyo Somaliya Oo La Filayo Inay Kulmaan + Laba Waddan Oo Tartan Ugu Jira Inay Marti Geliyaan Kulanka.